Njikọ njikọ chaja EV
Njikọ chaja EV
Pịnye 1 njikọ EV
Pịnye 2 EV njikọ
CCS Combo 1 nkwụnye
CCS Combo 2 nkwụnye
GB/T DC egbe
Soja EV chaja
Pịnye 2 EV Socket
Ntinye CCS Combo 1
Ntinye CCS Combo 2
USB chaja cha cha
Pịnye 1 ruo ụdị 2
Pịnye 2 ruo Pịnye 2
Pịnye 1 ejikọtara eriri
Pịnye eriri abụọ ejikọtara
USB gburugburu USB
Portable EV chaja
Ụdị chaja EV 1
Ụdị chaja EV 2
32A chaja chaja EV
40A chaja chaja EV
3.6 KW igbe akwụkwọ ozi
7.2KW igbe igbe
Igbe igbe 11KW
Igbe igbe 22KW
DC Fast chaja
Chaja ngwa ngwa DC
Chaja CCHA CHAdeMO
Ihe nkwụnye EV
Pịnye 1 ka Pịnye 2 nkwụnye
Pịnye 2 ka Pịnye 1 nkwụnye
Tesla ruo J1772 nkwụnye
J1772 na nkwụnye Tesla
CCS 1 ruo CCS 2 nkwụnye
CCS 2 ruo CCS 1 nkwụnye
Ụdị A & Ụdị B RCD
B Ụdị RCD
Pịnye A RCBO
Ụdị B RCBO
Onye njikwa EPC EVSE
Ụdị Nchaji EV
Ụdị ụgbọ ala eletrik
Ịkwụ ụgwọ azụmahịa
Ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ
Ụdị dị iche iche nke njikọta Nchaji EV
Enwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji tụlee ịgbanwere ọkụ eletrik site n'ụgbọ ala mmanụ ọkụ.Ụgbọ ala eletrik dị jụụ, nwere ọnụ ahịa dị ala ma na -emepụta anwuru ọkụ pere mpe nke ọma na wiil. Ọ bụghị ụgbọ ala eletrik na nkwụnye niile ka ahapụrụ ka agbanyeghị. Njikọ njikọ chaja EV ma ọ bụ ụdị plọg dị iche na mpaghara na ụdị.
Kedu ka m ga-esi mara nkwụnye n'ime ụgbọ eletrik m na-eji?
Ọ bụ ezie na mmụta nwere ike ịdị ka nke ukwuu, ọ mara ezigbo mma n'ezie. Ụgbọ ala eletrik niile na -eji njikọ nke bụ ọkọlọtọ n'ahịa nke ha maka chaja ọkwa 1 na ọkwa 2, North America, Europe, China, Japan, wdg Tesla bụ naanị otu, mana ụgbọ ala ya niile na -eji eriri nkwụnye mee ka ọkọlọtọ ahịa sie ike. Ụgbọ ala eletrik na-abụghị Tesla nwekwara ike iji ụgbọ ala Tesla Level 1 ma ọ bụ 2, mana ha kwesịrị iji ihe nkwụnye nwere ike zụta n'aka onye na-ere ahịa nke atọ. Maka chaja ngwa ngwa DC, Tesla nwere netwọkụ nke ọdụ ụgbọ mmiri Supercharger nke naanị ụgbọ ala Tesla nwere ike iji, enweghị ihe nkwụnye ga -arụ ọrụ na ọdụ ndị a n'ihi na enwere usoro nyocha. Ụgbọ ala Nissan na Mitsubishi na -eji ọkọlọtọ Japan CHAdeMO, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala eletrik ọ bụla ọzọ na -eji ọkọlọtọ chaja CCS.
Ụdị ọkọlọtọ North America Ụdị 1 EV nkwụnye
Pịnye 1 EV Socket
Ụkpụrụ European IEC62196-2 Pịnye 2 EV njikọta
Pịnye Solet Inlet 2
A na -akpọkarị njikọta ụdị 2 njikọ 'Mennekes', mgbe onye nrụpụta German mepụtara nka. Ha nwere plọg-pin 7. EU na-atụ aro njikọta ụdị 2 na ọkọlọtọ IEC 62196-2 na-akpọkarị ha.
Ụdị njikọ njikọ chaja EV na Europe yiri nke ndị dị na North America, mana enwere ọdịiche abụọ. Nke mbụ, ọkụ eletrik ezinaụlọ dị 230 volts, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa nke North America ejiri. Enweghị ụgwọ "ọkwa 1" na Europe, maka nke ahụ. Nke abụọ, kama njikọ J1772, njikọ IEC 62196 Type 2, nke a na -akpọkarị mennekes, bụ ọkọlọtọ nke ndị nrụpụta niile na -eji ma e wezụga Tesla na Europe.
Ka o sina dị, n'oge na -adịbeghị anya, Tesla gbanwere Model 3 site na njikọ njikọ ya na njikọ Type 2. Ụgbọ ala Tesla Model S na Model X a na -ere na Europe ka na -ejikọ njikọ Tesla, mana ịkọ nkọ bụ na ha ga -emesịa gbanwee gaa na njikọ European Type 2.
Njikọ CCS Combo 1
Njikọ CCS Combo 2
CCS na -anọchite anya Sistem Nchaji jikọtara ọnụ.
Usoro Nchaji ejikọtara ọnụ (CCS) na -ekpuchi chaja Combo 1 (CCS1) na Combo 2 (CCS2).
Site na ngwụcha afọ 2010, ọgbọ chaja jikọtara chaja Type1 / Type 2 nwere nnukwu njikọ DC ugbu a iji mepụta CCS 1 (North America) na CCS 2.
Njikọ njikọ a pụtara na ụgbọ ala ahụ na -eme mgbanwe n'ihi na ọ nwere ike were ụgwọ AC site na njikọ dị na ọkara ma ọ bụ ụgwọ DC site na akụkụ njikọta 2. Dịka ọmụmaatụ, Ọ bụrụ na ịnwere oghere CCS Combo 2 n'ime ụgbọ ala gị ma chọọ chajịa n'ụlọ na AC, ị na -etinye plọg Type 2 nke ọma na ọkara nke elu. Akụkụ DC dị ala nke njikọ ahụ ka bụ ihe efu.
Na Europe, ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa DC bụ otu ihe ahụ na North America, ebe CCS bụ ọkọlọtọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nrụpụta niile ewezuga Nissan, Mitsubishi. Sistemụ CCS dị na Europe na -ejikọ njikọta ụdị nke abụọ na ntanye ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka njikọ J1772 na North America, yabụ ebe a na -akpọkwa ya CCS, ọ bụ njikọ dịtụ iche. Model Tesla 3 na -eji njikọ CCS Europe.
Njikọ ọkọlọtọ CHAdeMO nke Japan & Socket Inlet SoCHA
CHAdeMO: Ngwa ọrụ Japan TEPCO mepụtara CHAdeMo. Ọ bụ ọkọlọtọ ndị ọrụ gọọmentị Japan na ihe niile chaja ngwa ngwa nke ndị Japan DC na -eji njikọ CHAdeMO. Ọ dị iche na North America ebe Nissan na Mitsubishi bụ naanị ndị na -ere ụgbọ ala eletrik na -eji njikọ CHAdeMO. Naanị ụgbọ ala eletrik na -eji ụdị njikọ njikọ chaja CHAdeMO EV bụ Nissan LEAF na Mitsubishi Outlander PHEV. Kia kwụsịrị CHAdeMO na 2018 wee nye CCS ugbu a. Njikọ CHAdeMO anaghị ekerịta akụkụ nke njikọ ya na ntinye J1772, na -emegide sistemụ CCS, yabụ ha chọrọ ntinye ChadeMO ọzọ na ụgbọ ala Nke a chọrọ ọdụ ụgbọ mmiri buru ibu.
Ihe njikọ Tesla Supercharger EV & Sola EV
Tesla: Tesla na -eji otu ọkwa 1, ọkwa 2 na DC na -ejikọ njikọ ngwa ngwa. Ọ bụ ihe njikọ Tesla nwe ụlọ nke na -anabata voltaji niile, yabụ dịka ụkpụrụ ndị ọzọ chọrọ, ọ dịghị mkpa inwe njikọ ọzọ kpọmkwem maka ụgwọ ngwa ngwa DC. Naanị ụgbọ ala Tesla nwere ike iji chaja ngwa ngwa DC ha, nke a na -akpọ Superchargers. Tesla arụnyere ma debe ọdụ ndị a, ha bụ maka naanị ndị ahịa Tesla. Ọbụlagodi na eriri ihe nkwụnye ọkụ, ọ gaghị ekwe omume ịkwụ ụgwọ nke abụghị tesla EV na ọdụ Tesla Supercharger. Nke ahụ bụ n'ihi na enwere usoro nyocha nke na -egosipụta ụgbọ ala ahụ dị ka Tesla tupu enye ohere ịnweta ike. Ịkwụ ụgwọ Tesla Model S na njem okporo ụzọ site na Supercharger nwere ike ịgbakwunye ihe ruru kilomita 170 n'ime nkeji iri atọ. Mana ụdị V3 nke Tesla Supercharger na -ebuli ike nrụpụta site n'ihe dị ka kilowat 120 ruo 200 kW. Superchargers ọhụrụ ahụ mepere emepe, nke ewepụtara na 2019 ma na -aga n'ihu na -apụta, na -eme ka ihe dị ngwa ngwa site na pasent 25. N'ezie, oke na ịkwụ ụgwọ na -adabere n'ọtụtụ ihe - site na ike batrị ụgbọ ala ruo na chaja nke chaja ụgbọ mmiri, na ihe ndị ọzọ - yabụ "mgbatị gị nwere ike ịdị iche."
China GB/T EV Nchaji njikọ
China GB/T DC njikọ
China bụ nnukwu ahịa - ka ọ dị ugbu a - maka ụgbọ ala eletrik.
Ha ewepụtala usoro chaja nke ha, nke ụkpụrụ Guobiao na -akpọ dị ka: GB/T 20234.2 na GB/T 20234.3.
GB/T 20234.2 na-ekpuchi chaja AC (naanị otu ụzọ). Plọg na sọks dị ka ụdị 2, mana atụdo na ndị na -anabata ya na -atụgharị.
GB/T 20234.3 na -akọwa ka ịkwụ ụgwọ DC na -arụ ngwa ngwa. Enwere naanị otu usoro chaja DC na mba niile na China, karịa sistemụ asọmpi dị ka CHAdeMO, CCS, gbanwetụrụ Tesla, wdg, dị na mba ndị ọzọ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ndị otu CHAdeMO nke Japan na ọgbakọ ọkụ eletrik China (nke na-achịkwa GB/T) na-arụkọ ọrụ ọnụ na sistemụ DC ọhụrụ a na-akpọ ChaoJi. N'April 2020, ha kwupụtara usoro ọgbụgba ikpeazụ akpọrọ CHAdeMO 3.0. Nke a ga -enye ohere ịchaji ihe karịrị 500 kW (oke amps 600) yana ọ ga -enyekwa ụgwọ ọrụ bidirectional.Ịtụle China bụ onye kacha ere ahịa EV, yana na ọtụtụ mba mpaghara nwere ike sonyere gụnyere India, atụmatụ CHAdeMO 3.0 / ChaoJi nwere ike wepụ CCS ka oge na -aga dị ka ike kachasị na ịkwụ ụgwọ.
Shanghai Mida EV Power Co., Ltd. bụ onye nrụpụta ọgbara ọhụrụ nke akụrụngwa chaja ụgbọ ala eletriki ọhụrụ, gụnyere ụdị ihe njikọ EV na chaja sockets, eriri chaja EV ...
Copyright - 2018-2021: Shanghai Mida EV Power Co., Ltd. Ikike Niile Echekwabara
Ọgbakọ 34th World Electric Vehicle Congress (EVS34) Julaị-09-2021
Ahịa Igwe Nchaji Global EV (2021 ruo 2027) ... Mee-31-2021
European CCS (Ụdị 2 / Combo 2) na -emeri ụwa ... Mee-23-2021
Tinye: No.377 nke okporo ụzọ ChengPu, Fengxian District Shanghai 201499, China